Abaalmarinta Caddaaladda - Argagixisnimo Loo Raadinayo - Khalid Saeed al-Batarfi
Khalid al-Batarfi waa xubin sare oo ka tirsan Al-Qaacidada Gacanta Carabta [AQAP] ee Dowladda Xadramuut ee dalka Yemen iyo xubin hore oo ka tirsanaa AQAP guddigeeda shuura. Sanadkii 1991, wuxuu u safray dalka Afghanistan, halkaas oo uu ku soo tabbabartay xerada al-Farouq ee al-Qaacida. Sanadka 2001, wuxuu ka dhinac dagaalamayay kooxda Taliban ee ka soo horjeeday ciidamada Maraykanka iyo Isbahaysiga Neeto. Sanadka 2010, al-Batarfi wuxuu ku biiray AQAP Yemen, wuxuu hoggaaminayay dagaalyannada AQAP si gacan ay ugu dhigaan Gobolka Abyan ee dalka Yemen, oo waxaa loo magacaabay inuu noqdo amiirka AQAP ee Abyan. Geeridii hoggaamiyihii AQAB Nasir al-Wuhayshi ka dib ee bishii Juun 2016 ee weerarkii ciidamada Maraykanka, wuxuu soo saaray qoraal digniin ah in kooxda al-Qaacida ay burburinayso dhaqaalaha Maraykanka iyo inuu weerar ku qaadayo danaha kale ee Maraykanka.
Ka dib markii dowladda Maraykanka ay ku dhawaaqday inay Baytal Muqadas u aqoonsan doonto magaala madaxda Israaiil, bishii Janaayo al-Batarfi wuxuu ka soo muuqday fiidiyow AQAP, isagoo u hanjabayay dadka Maraykanka iyo dadka Yahuuda. 23ka Janaayo, 2018, Waaxda Arrimaha Dibadda ee Maraykanka, al-Batarfi waxay u magawday inuu yahay Argagaxiso Caalami oo Gaar ah (SDGT) markii loo hiigsaday Amarrada Dowliga ee 13224.
Riyadh, Sacuudi Carabiya
Al-Qaacidada Gacanta Carabta (AQAP)
Wasaarada Arimaha Dibadda FTO: 19ka Janaayo, 2010
Wasaarada Arimaha Dibadda SDGT: 19ka Janaayo, 2010
Liistiga QM: 19ka Janaayo, 2010
Shaqsi Argaggaxiso u Idmatay:
Wasaarada Arimaha Dibadda SDGT: 23ka Janaayo, 2018